Tops & Outerwear Factory - Sina Tops & mpanamboatra akanjo ivelany, mpamatsy
Akanjo Zipper mitafy lamba volom-behivavy
Akanjo manosika masoandro izay miaina amin'ny fahavaratra, maivana ary azo alaina, miaraka amin'ny loko lamaody, manjaitra ny volon'ny masony amin'ny lafiny rehetra, mitroka ny hamandoana ary lamba manamaivana haingana, lamba mavo maizimaizina, porofo madiodio, hetsika maimaimpoana. Loose Version, Sariaka ary feno endrika vatana samihafa, S
Palitao amina zipo mitafy fanatanjahan-tena an'ny vehivavy
Mijery manify, Volavola misaraka telo-telo, mamolavola endrika tsara ny fiolanan'ny vatana miaraka amin'i Hoodie, tsy hatahotra ny fiovan'ny toetr'andro ianao, hahazo fiadanan-tsaina bebe kokoa ary fahafinaretana amin'ny fanatanjahantena ety ivelany
Fanatanjahan-tena ara-panatanjahantena indroa vita amin'ny vehivavy
Ny fampiasana ny fitaovana maina miaraka amin'ny kaoka, ny fanosorana ny hamandoana ary ny fanesorana ny hatsembohana dia manatsara ny fahatsapana amin'ny antsipirihany amin'ny famolavolana endrika roa sanganasa mba hahatonga azy io ho ambaratonga bebe kokoa amin'ny lafiny fitantanana, hanatsara ny fomba iray amin'ny fanafenana tapa-nofo roa, manaova veloma ny fitafiana sarotra.
Akanjo lava volom-borona fohy volom-borona fohy an'ny vehivavy
Loose Profile, Fresh And Breathable, Versatile Leisure Fanontana mahaliana, Fanontana offset kalitao, famoahana ny tanjaky ny fahatanorana Mahitsy ny tady, azo omena mora foana ny akanjo, ny famolavolana ny famolavolana dia mety ahitsy mora foana. Rehefa manenjana azy ianao, dia mahasalama kokoa ny valahanao
Vehivavy fanatanjahan-tena vita amin'ny fanatanjahan-tena vita amin'ny Bronze vehivavy
Loose Version afaka manafina hena tsara. Ny lokon'ny vatomamy dia mamoaka ny fahatanoran'ny tanora miolaka, manarona tsara ary mampiseho ny fiolahana vatana amin'ny fametahana kofehy marefo, mampihena ny fifandirana ary mampiorina ny hozatra. Fitaovana manjaitra tena tsara, malefaka sy mahasalama, tsy misy fahatsapana amin'ny vatan'ny vahiny
Fanatanjahan-tena ara-panatanjahan-tena vita amin'ny leoparda vehivavy
Andramo ny fomba tsy mitovy, loko miloko miaraka amina endrika lamina miverina mamorona zavatra tsara tarehy. Fanamboarana metika manokana fanamboarana metimety fanjairana fanjairana fanjairana, malefaka sy fanatanjahan-tena, tsy misy fiheverana ny vatan'ny vahiny Ny tadin'ny fehin-tànana dia vita amin'ny fantsom-lamba, asa-kanto mahafinaritra
Akanjo boribory lava vita amin'ny tanany fohy voarony
Ity t-Shirt ity dia manana endrika volom-borona somary fisaka miaraka amina endriny misaraka sy lava ramanavy, izay ahazoana aina kokoa ny mitafy ary mety amin'ny fanatanjahan-tena rehetra. Ny vatana dia vita amin'ny lamba slub, feno fanavaozana.
Vest stitching fanatanjahan-tena tery vehivavy
Ny vozony dia mampiasa ny lamba mifanohitra hanaovana ny fantsona, izay mahafaly amin'ny hoditra ary mahazo aina. Fampiasana ny lamba mifanohitra amin'ny lokon'ny lamba mampisaraka amin'ny lamba mba hanatsarana ny fiovan'ny fahitana ny firafitry ny fizarazaran-kofehy manjaitra fanjairana fanjairana tsara indrindra, malefaka sy mahasalama, tsy misy mandrakizay
Palitao Zipper ara-panatanjahantena miakanjo vehivavy
Ny Buckle Thumb Fixed dia miaro tsara ny cuffs amin'ny famoahana, paosin-drivotra sy mafana ary paosy mora ampiasaina, mora mitazona zavatra madinidinika, miaraka aminao handeha mora
T-Shirt volom-borona lava lava an'ny fanatanjahan-tena an'ny vehivavy
Ny famolavolana vozona boribory dia mahazatra sy marobe. Ny endrik'ilay tanana vita amin'ny plug-in, ny tsipika malefaka, ny fitafiana mahazo aina sy malala-tanana. Volavolan-tsolika miolikolika miolikolika eo an-tokonam-baravarana, manana endrika sy olona. Azonao atao ny mampiseho ny andilanao rehefa manao azy ianao, manao azy ho mora sy lamaody hanaovana fanatanjahan-tena.
T-Shirt vita amin'ny pirinty fohy an'ny fanatanjahan-tena an'ny vehivavy
Tenda maranitra tsotra, mahazatra ary marobe. Endrika fohy-tanana, famolavolana kinova mahazatra. Ny vakana vozon'akanjo aoriana dia vita, ary ny zaitra tsara dia mampiseho ny asa-tanany mahafinaritra amin'ny orinasa lehibe. Ny eo alohan'izay dia vita pirinty miaraka amin'ny lakaoly voasary taratasy, ary ny vatana dia vita amin'ny atmospheric grey cationic knitte
Vehivavy fanatanjahan-tena mitafy hoditra Zipper Sun Protection
Masoandro amin'ny fahavaratra, miaina fonjamasoandro amin'ny fiarovana ny masoandro sy ny masoandro tsy miady amin'ny Uv, Upf50 + Tsy hatahotra ny hazavan'ny masoandro ianao, manakana amin'ny fomba tsara ny tatitra momba ny fanamarinana ireo tara-pahazavana momba ny tara-pahazavana.
Palitao fanatanjahan-tena, Lamba firakotra roa sosona, Akanjo fohy vita amin'ny ravina haingam-pandeha ho an'ny lehilahy, Pataloha fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy, Akanjo fohy fanatanjahan-tena haingam-pandeha, Fanodinana santionany sy famokarana,